Mila ampidirina anaty adihevitra momba ny fahazoana vaksiny ny fizahantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Mila ampidirina anaty adihevitra momba ny fahazoana vaksiny ny fizahantany
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Cruising • Eswatini Breaking News • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • WTN
Raha manana famatsiana vaksiny mihoatra ny ampy ny olom-pirenena any Eropa sy Amerika Avaratra, i Afrika, Karaiba ary toerana itodiana fizahantany lehibe no ao ambadik'izao tontolo izao. Mampijanona ny toekarena izany, indrindra ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina dia nanery ny hampitombo ny vaksinin'ny COVID-19 any Afrika. Nambarany fa nilaozan'ny fizahantany ny fizahantany.
Networ momba ny fizahantany manerantanyk Ny filoha Juergen Steinmetz dia namporisika ny fizahantany ho anisan'ny dinika. Sehatra toekarena tena ilaina ho an'ny firenena maro ny fizahantany ary tsy afaka miasa raha tsy samy manana vaksiny ireo matihanina sy ireo mpitsidika.
Ireo lehiben'ny Tahirimbola Iraisam-pirenena (IMF), Banky Iraisam-pirenena, Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO), ary World Trade Organization (WTO) dia nihaona tamin'ny mpitarika ny Africa Vaccine Acquicit Trust (AVAT), Africa CDC, Gavi, ary UNICEF ho mampitombo haingana ny vaksininy any amin'ny firenena manana fidiram-bola ambany sy ambany, indrindra any Afrika.
“Ireo firenena ireo, izay ny ankamaroany dia any Afrika, dia tsy afaka miditra amin'ny vaksinina ampy hihaona amin'ny tanjona manerantany misy fandrakofana 10 isan-jato amin'ny firenena rehetra amin'ny volana septambra ary 40 isan-jato amin'ny faran'ny 2021, tsy misy afa-tsy ny tanjon'ny Vondrona afrikanina 70 isan-jato amin'ny 2022 », Hoy ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny ONU.
Tsy fitoviana vaksiny
Ny krizy tsy fitoviana amin'ny vaksiny dia mitarika “divergence mampidi-doza” amin'ny tahan'ny fahaveloman'ny COVID-19 sy ny toekarena manerantany, hoy ny lohan'ny masoivoho, naneho ny fankasitrahany ny “asa lehibe” an'ny AVAT sy ny COVAX amin'ny fiezahana hamaha ny "toe-javatra tsy azo ekena" .
Na izany aza, nampitandrina izy ireo fa "ny famahana amin'ny fomba mahomby ity tsy fahampian'ny vaksinina mahery vaika ity any amin'ny firenena ambany sy ambany ny fidiram-bola, ary ahafahan'ny AVAT sy COVAX feno dia mila fiaraha-miasa maika amin'ireo mpamokatra vaksinina, firenena mpamokatra vaksinina, ary firenena efa nahatratra taha ambony amin'ny vaksiny ”.
Mba hahazoana antoka fa hahatratra ny tanjona eran-tany ny firenena rehetra farafahakeliny farafahakeliny 10 isan-jato amin'ny volana septambra, ary 40 isan-jato amin'ny faran'ny taona, ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Firenena Mikambana dia niantso ireo firenena izay nanao vaksinina betsaka mba “hifanakalo fotoana akaiky miaraka amin'ny COVAX sy AVAT ”.
Nanoro hevitra ireo mpanamboatra vaksinina ihany koa izy ireo mba “hanao laharam-pahamehana ary hanatanteraka” ny fifanarahan'izy ireo amin'ny COVAX sy AVAT, ary hanome vinavinan'ny mpamaky vina mazava sy mazava.
Ankoatr'izay, ny sefon'ny sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana dia nanentana ireo firenena indostrialy G7 sy ireo firenena rehetra mizara doka mba "hanatanteraka ny fampanantenany maika" miaraka amin'ny fahitana fantsom-pivoarana, ny fiainana talantalana, ary ny fanampiana ireo famatsiana fanampiny - satria zara raha nisy 10 isan-jaton'ny fatra nanatontosa 900 tapitrisa mbola halefa.
"Miantso ny firenena rehetra izahay mba hanafoana ny famerana ny fanondranana sy izay sakantsakana hafa amin'ny varotra COVID-19 sy ny fampidirana azy ireo", hoy hatrany ny fanazavana.
'Tandindomin-doza' ny fahasalaman'izao tontolo izao
Mifanindran-dàlana amin'izany, ireo masoivohon'ny Firenena Mikambana dia manamafy ny asan'izy ireo miaraka amin'ny COVAX sy AVAT hiatrehana ny olana amin'ny famoahana vaksinina, ny famokarana ary ny varotra maharitra, indrindra any Afrika.
Mihetsika ny famatsiam-bola sy ny famatsiam-bola hanoherana ity asa ity.
"Hodinihinay ihany koa ny rafitra famatsiam-bola hialana amin'ny filan'ny vaksinina amin'ny ho avy araka ny angatahin'ny AVAT… [ary] hisolo vava ny vinavinan'ny famatsiana sy famatsiam-bola tsaratsara kokoa hampitomboana ny fiomanana amin'ny firenena sy ny fahafaha-mitroka azy", hoy izy ireo nanome toky.
Ny masoivohon'ny Firenena Mikambana dia nanohana fa hanohy hanatsara ny angon-drakitra ihany koa izy ireo, hamantatra ireo banga ary hanatsara ny mangarahara amin'ny famatsiana sy ny fampiasana ireo fitaovana COVID-19 rehetra.
“Ny fotoana hanaovana hetsika dia izao. Ny lalan'ny valanaretina - sy ny fahasalaman'izao tontolo izao - no atahorana », hoy ny fehin-teny.
Ny filohan'ny fizahantany afrikanina Cuthbert Ncube dia nilaza hoe:
“Ny fizahantany afrikanina dia tsy hiara-hiasa amin'ny olona rehetra ao amin'ny tsenan'ny loharanom-baovao sy mpandray antsika afaka miditra vaksinina. Tena iharan-doza i Afrika. Ireo sehatr'asa voakasik'izany rehetra, indrindra ny fizahantany dia tsy maintsy hitovy latabatra rehefa misy ny fizarana vaksinina toy izany. ”
Juergen Steinmetz, filohan'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany nanampy hoe:
Manelingelina ny tsy mahita UNWTO ka tsy ho anisan'ity dinika ity. Mila solontena maika amin'ny sehatra rehetra ny sehatra misy anay. Ny vaksininy no fototry ny fizahan-tany rehetra hiasa. Vonona ny WTN hameno ity banga ity ary hiteny ho an'ireo izay tsy afaka na tsy afaka. ”